Xhumana nathi | Inkampani Yomthetho Eklonyelisiwe
asikhulume, Sishayele manje!
Thola usizo lwezomthetho ngokushesha
Inkampani yethu yezomthetho ingena enkantolo e-Dubai noma kunoma iyiphi ingxenye ye-Emirates. Sisebenzisa ezinye izindlela zokuxazulula izingxabano (ADR) njengokulamula nokusombulula. Lezi zingxabano zibandakanya: izingxabano zenkampani phakathi kwabaninimasheya, ophathina, abanikazi, abatshalizimali, ama-LLC kanye nobambiswano; amacala abandakanya ukwephulwa kwezinkontileka, ukukhwabanisa, ukwephula imfihlo, ukumelwa kabi, ukungancintisani, nezivumelwano zokungadalulwa kwabantu noma izinkontileka; izingxabano ezahlukahlukene zebhizinisi phakathi kwamabhizinisi, ezidinga abanolwazi bendawo, abameli bomthetho we-sharia kanye nabameli bamazwe omhlaba.
Sishayele ukuthi silungiselele i-aphoyintimenti ehhovisi lethu
Sivakashele namuhla ukuthola ukuxhumana okuhle kwezomthetho noma uhambise udaba lwakho nge-imeyili noma ngaleli fomu.
Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants
I-Al Reem Tower, iDeira
Abameli abazinikezele nabanolwazi
Lapho ucindezelwa empilweni, kwesinye isikhathi udinga umuntu ozokusiza. Njalo kanye isikhashana, ngaphandle kwendawo, une-superhero engena.
Hambayo: + 971506531334 noma Iselula: + 971558018669
Sithumele i-imeyili Manje
Imicabango engama-31 ku- "Xhumana nathi"
10/23/2014 ngo-6:35 AM
Ngicela ummeli wedivosi. Ngineminyaka engu-7 ngishadile nomyeni wami ePhilippines. I am based here in Dubai for almost 7yrs already and my husband left here since 2011. Angikaze ngizwe ngaye since 2012. Kungenzeka yini ukuthi ngifake idivorce ngisuka la eDubai? Asinazo izingane nanoma yiziphi izindawo zokuganana.
Usizo lwakho luyothokozelwa kakhulu.
12 / 08 / 2014 ku-5: 53 PM
Benginebhizinisi lezimoto eDubai free zone .. I-Al-Awir ngokubambisana
Bengikhiphe iPower of Attorney kumlingani wami ukuthi ayethule lapho kudedelwa izimoto
Ngingathanda ukulenza lize amandla la abameli.
Ake ungazise uma ukwazi ukusebenzisa amandla we-Nullify of Attorney nokuthi kungakanani
Njengamanje ngihlala eTexas USA
Ngiyethemba ukuzwa kuwe kungekudala
04/18/2015 ngo-9:21 AM
Siyabonga ngokuxhumana nathi .. siphendule i-imeyili yakho.
12/27/2014 ngo-6:17 AM
Nginecala lomunye womngane wami owabamba ngenkathi eshayela ngaphandle kwesihlalo sebhande, amaphepha emoto nangomuthi othile wegazi we-abu dhabi.
Amaphoyisa ambopha kanti kusasa ukulalelwa kwakhe kokugcina.
Ngakho-ke, ungangeluleka ukuthi uluphi uhlobo losizo ongasinika lona nokuthi yini imali yakho. Sicela uyiphathe njengokuphuthumayo kakhulu.
12/29/2014 ngo-4:19 AM
Imoto yami yabhalwa ngoJuni kulo nyaka yimoto yenkampani eyangena kimi esiqeshini sezimoto zomgwaqo. Nginenkinga enkulu yokuthola isinxephezelo ngomkami nami.
01/03/2015 ngo-9:16 AM
Njengamanje ngisebenzela Isikole sase-Glenelg sase-Abu Dhabi, ngenkathi ngisayina inkontileka yami ngo-2011 umgomo wesikole wawuwukuba isisebenzi sinikeze isaziso sezinyanga ezi-3 lapho sisula (ngokwencwadi ye-Faculty Handbook esiyinikezwe yona). Ngokuvamile ngo-January sisayina ifomu lenhloso elishoyo ukuthi siyafisa yini ukubuya noma cha ngonyaka wezifundo olandelayo, kodwa ukwesula kwakwamukelwa kanye nenkathi yesaziso esiyizinyanga ezi-3 unyaka wonke. Kulo nyaka isikole sengeze isitatimende esithi zonke izicelo zokwesula ezilethwe ngemuva komhla zingama-30 kuJanuwari zizochithwa. Umbuzo wami uthi kusemthethweni yini ukuthi benze njalo?? futhi ngingenqaba yini ukusayina?Ikakhulukazi njengoba izikole eziningi ziqala ukuqashwa ngoFebhuwari.
01/04/2015 ngo-6:59 AM
Ngidinga usizo ekutholeni amandla athile abameli kumuntu ngamunye ukucubungula ukuvalwa kwebhizinisi e-Abu Dhabi. Ungakwazi yini ukusiza ngalokhu?
01/08/2015 ngo-8:50 AM
Ngiyi-GM ye-ejensi yokuqasha e-INDIA FUNDY BUSY GERERMENT YOKUXELWA UKUTHOLAKALA, ngifuna ukufaka isimangalo ku-co co MD ongibangele ukulahlekelwa yimina ngokukhipha izincwadi zebhizinisi zokuqasha ama-Indian expartiraites ayi-100. Sichitha cishe isilinganiso esingu-20000AED sokuhlela umkhankaso wokuqashwa kwabaqokile bakhetha abantu abakhiphe izincwadi futhi manje sibambezela ngenhloso inqubo ye-visa eyedlule ezinezilimaza ukuphindeka kwebhizinisi lethu, ukucabanga kwengqondo nokulahleka kwezezimali
Singasifaka kanjani isimangalo esisemthethweni kubo futhi kuzokwenzenjani?
04/18/2015 ngo-9:19 AM
01/13/2015 ngo-5:34 AM
Mina nomyeni wami sinepropathi eDubai okuyigama lethu sobabili nempahla ebanjiswayo. futhi ngine-akhawunti yami yasebhange futhi inayo eyakhe.
Simuka eDubai siye ezweni lethu asenzele lona okuhle kodwa sigcina impahla yethu nama-akhawunti ethu asebhange.
Sidinga izeluleko ku:
Iyiphi indlela engcono kakhulu yezomthetho esisinikeza amandla amakhulu ngaphezu kwezinto zabanye.
Uma kwenzeka sifa noma ukhubazekile, noma noma nje sifuna ukuthengisa impahla kodwa munye kuphela wethu oza eDubai ukuzonakekela konke ngakho asikho isidingo sokuthi sobabili size eDubai.
Futhi singakuhlelela kanjani ukuba negunya eligcwele phezu kwabanye ama-akhawunti asebhange?
Singahlangana nommeli enkampanini yakho ukuseluleka ngalolu daba?
01 / 22 / 2015 ku-12: 22 PM
Ngidinga usizo ngesehlukaniso, ikakhulukazi mayelana nokuhlukaniswa kwempahla nemithetho efanayo.
02/01/2015 ngo-9:31 AM
USalamvalekum ake ngizethule ukuthi ngingummeli ohlwini lwe-Andhrapradesh Bar Council of India Umyeni kadadewethu ushone engozini yomgwaqo eSohar of Oman ngicela usazise ukuthi izindlalifa ezisemthethweni zisifuna kanjani isinxephezelo eNdiya.Inqubo efanele, imithetho yase-Oman okuyiyo esebenzayo futhi yiziphi izincwadi ezidingekayo kuyo njll., Ngicela ungisize ekutholeni isinxephezelo kudadewethu onezingane ezimbili ezincane, ngixhumana nawe ngethemba ukuthi uzongiqondisa kahle.
Ngiyabonga mnumzane / madam
04/18/2015 ngo-9:18 AM
02 / 06 / 2015 ku-1: 52 PM
Sawubona Mnumzana ,
Nginombuzo mayelana nenkontileka yami neqembu lebhola . Ngokwenkontileka sithola I-BONUS MONEY yomdlalo ( umphumela wokuwina noma wokudlala ngokulingana) .Ngesikhathi ngishiya iqembu abazange bakhokhe futhi bamane baqhubeka nokushaya indiva isicelo sami sokungikhokhela ngama-e-mail ami…
Ngingajabula kakhulu uma unginika noma yiluphi uhlobo lwezeluleko mayelana nokuthi ngenzeni ukuthola imali yami. Bengizama ukuxhumana nomphathi wezemidlalo wekilabhu ukuze sikhulume ngalolu daba kodwa ubevele engawanaki ama-imeyili ami…
02/17/2015 ngo-8:47 AM
Sawubona uzibuza nje ukuthi ngabe ifemu yakho iyasizakala lapho uthatha khona iphesenti okuvunyelwene ngalo ngokululama okuphezulu. Sitshale imali saba ngamayunithi ama-2 eDubai emuva ngonyaka ka-2008. Kuze kube yiminyaka embalwa edlule njengoba uzwile ukuthi kwakukhona ikomidi elisha elibhekele wonke amaphrojekthi akhanseliwe futhi laliphethe noma liqeda ukukhokhela abatshalizimali bokuqala ababehlupheka ngalokhu. Kube kuyo yonke imithombo yezindaba nezindaba eminyakeni embalwa edlule futhi ekugcineni saxhumana ngentuthuko entsha yonjiniyela Q. Amaphrojekthi wethu angumbono oluhlaza wokubuka komhlaba 2 no-3 futhi sikhokhe ama-dirham angaphezu kwama-551000. Sonke sinemibhalo nezitatimende zasebhange. Besizibuza ukuthi ungasiza yini ukulamula nokusiza ukubuyisa imali yethu. Besikade sixhumana nonjiniyela kepha izinketho zabo zokuhlala azikho ezizobhangqa nalokho esicabanga ukuthi sikufanele ngemuva kokulinda yonke le minyaka. Uma ungangibhalela nge-imeyili ngomusa singakhuluma futhi ngalolu daba. Ngiyabonga ngomusa.
03 / 06 / 2015 ku-4: 26 PM
(lo mlayezo awukona ukuzibophezela kokubandakanya izinsizakalo zakho zomthetho, akukho mali ezofaka isicelo sokufunda kwakho noma ukuphendula lo mlayezo, futhi akukho zindleko noma izinkokhiso ezizodonswa ngaphandle kwesiqinisekiso esibhalwe phansi sokuzibandakanya kwami)
Sawubona - isithuthuthu sami sashayiswa ngemuva umshayeli wase-Emirati ngomhlaka-13 Feb ngase ngiphuthunyiswa esibhedlela nginqunywe umunwe kanye nomlenze owaphuka kabi. Umshayeli uyinhloko emaphoyiseni e-RAK, une-14 yokwephulwa kwejubane elingakhokhelwa, ukubhaliswa kwemoto yakhe kwase kuphelelwe yisikhathi ngesikhathi sesigameko. Umbiko Wokuqala Wesigameko uyaqinisekisa ukuthi umshayeli unecala futhi nginecala enkantolo ngomhlaka-12 Mar ngo-0900 e-Mulla Plaza.
Kungenzeka yini eDubai ukwenza isicelo sesinxephezelo ngalo mshayeli? Nginezindleko zokulungiswa kwezithuthuthu, izikweletu zokwelashwa nokulungisa kabusha, esikhundleni se-6000 / - yezingubo ezilimele zesithuthuthu, ukulahleka kwemali etholwayo, ukungonakaliswa emlenzeni wami kanye nomunwe olahlekile.
04/18/2015 ngo-9:17 AM
03 / 06 / 2015 ku-8: 58 PM
Ngadingiswa ngonyaka owedlule ngenxa yenqubo yokuphatha noma i-oda.ngibheke ukuthi ukuvela kwabokufika kungivimbele. ungangisiza ukukhuphula lo msebenzi? Ngingabuya eDubai.Njengoba ngingenalo icala lobugebengu. Ngiye ngaya kuhlangana ne-gf yami endlini yakhe e-Dubai futhi ngasikhathi sinye amaphoyisa ahlola isakhiwo futhi angibamba futhi angikhipha. ngecala le-gf ???? ingabe icala elikhulu? ungasihola
04/16/2015 ngo-5:10 AM
Ngibheke ummeli noma inkampani yabameli, eyisipesheli esisingatha amacala okuhlukumeza kwezokwelashwa e-Dubai. Ungakwazi ukusiza?
04/19/2015 ngo-7:42 AM
I-whiplash yentamo yami yangakwesobunxele ngo-April 15, 2015 ngenxa yemoto eyashayisa itekisi ( mina nomunye umngane wami singumgibeli waleyo tekisi eshiwo). Ngizwa sengathi iso lami lesokunxele nendlebe yami yangakwesobunxele kuthinteke kakhulu ngenxa yaleso sigameko esishiwo…Nginayo yonke imininingwane yetekisi neFord Escape eyenzeke imoto eshayisane netekisi eshiwo….Ngingakwazi yini ukufaka isicelo sesinxephezelo uma isibonelo i-whiplash yami imnene kuphela ...
05 / 03 / 2015 ku-3: 45 PM
Yebo, kungenzeka, cela ukusishayela futhi usivakashele ngamadokhumenti .. 050 6531334
05/03/2015 ngo-10:56 AM
Nginenkontileka nenkampani eseDubai ebizwa ngeDelite Trailers LLC ukuthatha i-sblc $ 3million yethu esibanikeze yona ngababhange babo "Mashreq Bank Psc".
Ibhange liqinisekisile ukuthi lizosebenzisa lo msebenzi futhi sisebenzisa imali engaphezu kwama- $ 300,000.00 kuthengiselwano ngakho konke kungazelelwe, ibhange nekhasimende lakhishwa ngaphandle kwesizathu esithile.
Yini esingayenza ukubuyisa izindleko zethu?
05 / 03 / 2015 ku-3: 40 PM
yebo, kungenzeka kwayo .. sihlangabeze nathi ngemibhalo yakho ..
05 / 04 / 2015 ku-3: 25 PM
Mnu. Humphrey, sibonga ukuthumela imibhalo .. siwabukezile futhi singakwazi ukufaka icala, sizoxhumana futhi senze okudingakalayo. ngiyabonga.